विचित्र Archives - तामाचुली खबर
काठमाडौं, २९ असाेज । काठमाडौंका रामकृष्ण तिवारीलाई केही दिनअघि उनकी पत्नीले पारिजातको पात पकाएर झोल दिइन्। ती महिलाले पारिजातको झोल पिउँदा कोरोना भाइरस लाग्नबाट जोगाउँछ भन्ने सुनेकी रहिछन्। तिवारीले खुसीसाथ दुई गिलास पिए। तर, त्यसपछि उनको शरीरमा एक्कासि रक्तचाप घट्यो। ‘शरीरमा ब्लड प्रेसर कम भएर दुई दिनसम्म काम गर्न सकिनँ’, उनी भन्छन्, ‘एउटा समस्या समाधान होला भनेर खाएको, अर्को समस्या पो आइलाग्यो। दुई दिन प्रेसर बढाउनमै खर्च भयो।’ यो त
कोरोना भाइरस : स्पेनमा एकैदिन ५२५ जनाको मृत्य
Tamachuli khabar April 12, 2020 0
काठमाडौं– विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण स्पेनमा पनि तीव्र देखिएको छ । स्पेनमा पछिल्लो २४ घण्टामा ५२५ जनाले ज्यान गुमाएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या १६ हजार ६०६ पुगेको छ । स्पेनमा एकैदिन ४ हजार ७५० जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या १ लाख ६३ हजार २७ पुगेको छ । स्पेनमा संक्रमितमध्ये ५९ हजार १०९ जना उपचारपछि निको भएका छन् । ७ हजार ३७१ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने ८७
कोरोनाको त्रास : ब्यापारीले माक्स लुकाएर अपराध गर्दै छन्, लुकाएर अपराध नगरौं !
Tamachuli khabar March 4, 2020 0
यतिबेला समग्र विश्व नै कोरोना भाइरसको त्रासमा छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सबैतिरबाट प्रयास पनि भइरहेको छ। कोरोनाको सं’क्र’म’णबाट जोगिन सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ। तर, बजारमा अहिले मास्कको अभाव सिर्जना गरिएको छ। नेपालमा एक जनामा कोरोनाको सं’क्र’मण देखिएको र ती व्यक्ति पनि भाइरसमुक्त भइसकेका छन्। अन्य देशजस्तै नेपाल पनि भाइरसको उच्च जोखिममा छ। तर केही व्यापारीहरुले यसलाई पैसा कमाउने समयका रुपमा लिएका छन्। दुःख पर्दा सबैले साथ
Tamachuli khabar February 27, 2020 0
काठमाडौं– हरेक बार मानिसहरुले विभिन्न देवी देवताहरुको पूजा अर्चना गर्ने गर्छन् । बार अनुसार नै भगवानको पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ । बिहीबार देवताका गुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णुको लागि समर्पित छ । यो दिन व्रत बस्नाले धन, पुत्र तथा विद्या प्राप्ति हुनेछ । पहेलो रंगको कपडा लगाउने र पहेलै वस्तुको दान गरेमा शुभ मिल्नेछ । साथै, यो दिन विष्णुकी पत्नी लक्ष्मीको पनि पूजा गरिन्छ ।
Tamachuli khabar February 25, 2020 0
आज मंगलबार भगवान गणेशको दर्शन आराधना गर्नाले सबै कार्य शिद्धि हुने शास्त्रीय मान्यता छ। बक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा । निर्विघ्नं कुरू मे देव सर्व – कार्येशु सर्वदा ।। करोडौं सूर्यको जस्तो तेज भएका भगवान गणेश देवलाई आराधना गर्नाले बिघ्न बाधा र अधुरा काम पूरा हुन्छन् । शास्त्रअनुसार मंगलबारको दिन गर्न केही काम गर्न बर्जित गरिएको हुन्छ । सोमबार, बुधवार र शुक्रवारलाई सोम्यबारको श्रेणीमा राखिएको छ भने आइतबार र बिहीबारलाई
बिछोडको मोडमा सेलिब्रिटी
Tamachuli khabar February 14, 2020 0
मनोरञ्जन उद्योगमा प्रेम गर्नभन्दा ज्यादा टिकाउन गाह्रो छ। यो साल केही चर्चित जोडीले आफ्नो प्रेम सम्बन्ध बचाउन सकेनन्। शिल्पा पोखरेल-छवि ओझा वर्षको सबैभन्दा चर्चित ब्रेकअप शिल्पा पोखरेल र छवि ओझाको रह्यो। शिल्पाले छविले घरे लु हिं सा गरेको आरो प लगाउँदै प्रहरीमा उ जुरी दिएपछि दुई वर्षअघि मात्र विवाह गरेको यो जोडी झग डामा उत्रि यो। तर, यो झ गडा यति कु रूप भयो कि यसले सेलिब्रिटीको इमे जमाथि नै
नाेबेल र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले लिए अतिरिक्त शुल्क
Tamachuli khabar February 7, 2020 0
काठमाडौँ, २४ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्दै मोरङको नोबेल र बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले एमबीबीएसका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्न थालेका छन् । विद्यार्थी र अभिभावकलाई प्रलोभन, त्रास र धम्की दिएर कलेज सञ्चालकहरूले शैक्षिक सत्रको सुरुमै बढी शुल्क असुलेका हुन् । २९ लाखभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क उठाउने प्रयास गरेको नोबेलले थप शुल्क लिन ६ जना विद्यार्थीसँग कबुलियतनामा गराइसकेको छ । कबुलियतनामामा भर्ना, परीक्षा लगायत शीर्षकमा थप शुल्क लिने उल्लेख छ । नोबेलले बढी
Tamachuli khabar January 30, 2020 0
काठमाडौं, १६ माघ । आज वसन्त पञ्चमी अर्थात सरस्वती पुजा । प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन श्रीपञ्चमी पर्व विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइन्छ । ऋतुहरूको राजा वसन्तको सुरुवात हुने दिन भएकाले आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ । वसन्त ऋतु आगमनको उपलक्ष्यमा राष्ट्राध्यक्षले वसन्तपुर गई वसन्त श्रवण गर्ने परम्परा समेत रहदैँ आएको छ । साथै, संगीत, कला, साहित्य र विद्याकी खानी सरस्वतीको आज विधिपूर्वक पूजा आराधना
मंगलबार: यस विधिद्वारा गर्नुहोस् भगवान गणेशको पूजा
Tamachuli khabar January 28, 2020 0
आज मंगलबार । हिन्दु धर्म अनुसार हरेक साताको हरेक एकदिन कुनै भगवानको नाममा ब्रत बस्ने गरिन्छ । त्यसैगरी आज मंगलबार पनि धेरैजना गणेश भगवानको प्रार्थना गरि ब्रत बस्ने दिन । सबै किसिमका सुख प्राप्त गर्न, रक्तविकार शमन गर्न, शत्रुदमनका निम्ति, स्वास्थ्य रक्षार्थ तथा पुत्र प्राप्तिका लागि मङ्गलबारको ब्रत एकदमै उत्तम मानिन्छ । यो ब्रत शुक्ल पक्षको पहिलो मङ्गलबारबाट सुरु गर्नुपर्दछ । मंगलबारको ब्रतबाट मङ्गल ग्रहको अनिष्ट फल पनि शान्त हुन
कांग्रेस नेता रामहरी खतिवडाद्वारा घा’इतेहरूको हेलिकप्टबाट उ’द्धार !
Tamachuli khabar January 27, 2020 0
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् पूर्वसांसद रामहरी खतिवडाले जीप दु’र्घटनाका घा’इतेहरूलाई ओखलढुंगाबाट हेलिकप्टरमार्फत उ’द्धार गरेर काठमाडौं ल्याएका छन् ।ओखलढुंगा जिल्लाको फेदीगुठमा सोमबार बिहान बोलेरो जीप दु’र्घटना भएको थियो । दु’र्घटनामा फेदीगुठ – ५ का सन्तोष बिकको मृ’त्यु भएको छ ।दुर्’घटनामा कुमारी बिक, अनिता बुढाथोकी र जितबादुर खत्री ग’म्भीर घा’इते भएको नेपाली कांग्रेसका युवा नेता खतिवडाले जानकारी दिए ।घा’इते तीन जनालाई काठमाडौंको ह्याम्प अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घा’इतेहरूको